नेपालमा २ महिनाको बच्चामा पनि कोरोना देखियो, संक्रमितको संख्या ९९
By administrator on	 May 6, 2020 कोरोना अपडेट, देश, विदेशका खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
२४ बैशाख । नेपालमा २ महिनाको बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आज पर्सा जिल्लाका १७ जनामा एकैदिन कोरोना देखिएपछि संक्रमितको सख्या ९९ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा बुधबार बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधबार पर्साका १७ जनाको परीक्षण ‘पोजिटिभ’ आएपछि संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको बताउनुभयो । थपिएका संक्रमितहरु दुईमहिने शिशुदेखि ६६ वर्षसम्मका रहेका छन् ।
अहिलेसम्म ७१ पुरुष र २८ महिला संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये २२ जना उपचारपछि निको भएर फर्केपनि फर्केका तीनजना पुनः परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । आज कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएका १७ जना एकै परिवारका भएको पाइएको छ । उनीहरुकै परिवारका ३६ वर्षीय पुरुषमा आइतबार बैशाख २१ मा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–३ छपकैया निवासी ती पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँकै परिवार र आफन्तको गरि ३२ जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरि परीक्षण गर्दा १७ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको हो । आइतबार संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिका बुवा, आमा, दाजु, भाई, भाउजु, छोरो र भतिजामा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो ।